शुभेच्छा थापा अभिनित फिल्म ‘शिवम’को ट्रेलर सार्वजनिक ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ६ आश्विन सोमबार १३:४०
एजेन्सी, काठमाडौं। प्रेम कथामा आधारित चलचित्र ‘शिवम’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा शुभेच्छा थापा, रबि गिरी, सोहम भेट्वाल, रस्मी भट्ट, पल्पसा डंगोल, राजकुमार थापा, प्रपि गिरी, मदन सिटौलाको अभिनय रहेको छ । भने यस फिल्मलाई राजु गिरी निर्देशन गरेका छन् ।
एसके प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रलाई रामेश्वर हुमागाईंको छायाकंन र सुवास देवकोटाको सम्पादन रहेको छ । भने पर्वत कार्की र कल्पना खरेलले निर्माण गरेका हुन् ।असोज १७ गतेबाट रिलिज हुने यो चलचित्र एक्सन र प्रेम कथामा आधारित रहेको छ ।
PREVIOUS Previous post: सागर आलेको ‘दशै आयो तिहार आयो’ बोलको गीत सार्वजनिक !
NEXT Next post: भिमफेदी गाइजको नयाँ म्युजिक भिडियोमा एलिशा राईको अभिनय